Laga soo bilaabo i3Geo iyo 57 Tools ee Barnaamijka Guud ee Bulshada - Geofumadas
Laga soo bilaabo i3Geo iyo 57 qalabka Software-ka ee Brazil
Luulyo, 2012 GvSIG, tabo cusub
Maanta ayaa soo gaadhay warkii kuwii ka mid ah is-dhexgalka ee dadaalka u dhexeeya i3Geo iyo gvSIG, mawduuc in ay iila muuqataa in ay go'aan muhiim ah oo gvSIG Foundation inkastoo ay ogaadaan in ay tahay natiijo si dhib la arki karo ee hawl kasta oo qaadataa bilood istaraatijiyad qorshaynta caalami.
Waxay iyo goobaha kale ku hadlaan, waxaana ka badan oo ay bulshada user waxay ogaan doonaan; Hadda waxaan doonayaa in aan taabto saamaynta heshiis tan iyo i3Geo laga yaabaa in aan la aqoon in badan oo macnaha Hispanic, si kastaba ha ahaatee waa mid ka mid ah qalab ka soo jeedo Latin American in uu leeyahay wax badan in ay ka qayb qaataan hannaanka codsiyada horumariyo on il furan software geospatial. Sidoo kale qayb ka this ee maqaalka waa si ay u muujiyaan baaxadda qalab lacag la'aan ah in Brazil.
Maxay tahay sababta i3Geo?
Laga soo bilaabo barta farsamada of view, i3Geo waa aalad kale oo ka 2006 noqdo liisanka GPL, iyadoo awoodda in ay dadka dhexgalaan xog ku saabsan heerarka Nice halkaas, labada wada tashiga iyo tafatirka. mashaariic aad u xiiso badan in ka akhriyi kartaa gvSIG shaqeeya sida codsiga desktop si ay u abuuraan maps in laga soo saari doonaa internetka ah.
Laakiin muhiimadda i3Geo waa macnaha guud. Asal ahaan: Brazil.
Brazil waxay u taagan tahay horumarinta horumarka sanadaha soo socda ee ku yaala Latin America, iyo buundad istaraatiijiyadeed oo leh Portugal iyo Spain. Mexico waa pole kale ee Latin America ayaa la macno ah isdhexgalka la Central America iyo Caribbean ma samaynta sida ay noqon waa, sidaa darteed gobolku wuxuu sii wadaa inuu eego dhinaca koonfureed iyada oo loo bedelayo aqoon isweydaarsi, sida horeba looga arki karo Panama iyo Costa Rica. Maxaa ka dhigay Guatemala ayaa xiiso leh laakiin weli dhaco gaaban hogaan isagoo ka iman kara, oo dhan, waayo, tabar weyn ee Mexico ay keento monobolkii-dhaafka ah ee software lahaansho (sidoo kale loo yaqaan software ganacsi).
Farxad weyn oo Brazil ah ayaa ku jirta luqadda, sababtoo ah xitaa waa mid la mid ah Isbaanish, isdhexgalka luuqadaha kale wuxuu ku baxaa Ingiriisi, taas oo abuuraysa caqabad ku yaalo deegaankeeda Koonfurta Ameerika. Sidaa daraadeed, waxaan aragnaa i3Geo oo ah albaabka ugu horeeya ee keenaya in badan oo ka mid ah kartida Brazil ay ka soo baxday mawduucyada geospatism; waxaad ku qasban tahay inaad aragto liiska qalabka furan ee lacag la'aanta ah ee aan ku soo koobay maqaalka si aan u dareemo nooca quusta sababtoo ah waddan kasta oo America ah waxaa jira mashruucyo lacageed oo lacag ah oo sameeya waxyaabaha dhab ahaantii hore u jirey iyo isticmaalka bilaashka ah.
Caqabadda haysata Brazil ayaa ku jirta luqada, waxaan ku adkeysanayaa.
Taasi waa sababta i3Geo waa muhiim, sababtoo ah waxay ku darsataa dadaallada Koonfureed Koonfureed si ay isugu geeyaan istiraatiijiyado ku aaddan horumarka joogtada ah. Guud ahaanba ma waafaqsana woqooyi dadaallada imaatin meesha Bangiga Adduunka iyo IDB keenaan mashaariic casriyeynta la magac software oo xidhan, taas oo aanay sidaa u xumeyn laakiin suuragal ahayn in dal oo ay bixiyaan $ 600,000 sano ah liisanka Oracle waa cay in ay saboolnimada iyo jaahilnimada dhaqanka xun ee maamulka dadweynaha oo isbeddelaya qiyaasta ilaalinta siyaasadeed.
Waxaan ognahay in mustaqbalka barnaamijyada bilaashka ah inay muujiyaan in ay faa'iido u leedahay dadka, yaraynta kharashka aan loo baahnayn ee dadweynaha. Dabcan, waxa Ecuador ka hadlayo ma aha mid la mid ah sida Brazil ay leedahay. Taasi waa sababta ay u muuqato sida tallaabo yar laakiin muhiim ah oo isku xira dadaalada aan midna ahayn mid ka mid ah dalalka 5 ee ka kooban BRICS taasoo, iyadoo jidka ku jirta, ay kaalin weyn ka cayaarayso sii jiritaanka iskudhafka dhaqaalaha adduunka. Iyo in hindisaha uu yahay mid ka mid ah qodobada "Ibero-American" oo ah mid aad u wanaagsan, sababtoo ah Midowga Yurub waxaa jira wax badan oo ka mid ah qoraaga iyo xishoodka leh software bilaash ah.
Waa hagaag, waa inaan sugnaa warar dheeraad ah iyo wanaaga.
gvSIG waxaa lagu rakibay Java, isla luqada GeoServer. Tallaabadani, gvSIG waxay u dhigtaa habka ugu dhow ee MapServer, oo ah xogta daabacaadda xogta kale ee dhowaanahan uu ahaa mid aad u dhow Quantum GIS sababo macquul ah. Inkasta oo Wasaaradda Deegaanka ay ku guulaysatay i3Geo ayaa aad u sii dheer iyada oo la tixgelinayo daabacaadda xogta webka.
Mawduucdayada, waxbadan ayaan ka ogaan karnaa waxa i3Geo ka qaban karo, Isbanishka, iyo liiska qaybinta qaybta gvSIG.
Laakiin waxaan sidoo kale aaminsanahay in isbahaysigaasi uu furi karo meelo badan oo isgaarsiineed oo leh isdhexgalin weyn oo la xidhiidha ariurrada qalabka ah ee ay ku shaqeeyaan Brazil, iyo inay xor u yihiin inay isticmaalaan. Ilaa iyo inta ay dadaaladu furan tahay iska ilaali, waxaan heleynaa sii waaridnaansho, waxaanan aaminsanahay in caalamku uu matalayo malaayiin qof oo reer Brazil ah, waxaa jira awood weyn. Dabcan, Brazil waa in ay u bax inaad la kulanto iyo noqdaan kuwo la arki karo haddii ay rabto in ay xoojiso lafteeda sida koritaanka horumarinta ay u taagan tahay; wax aan aaminsanahay ayaa dhacaya horeba
Tallaabooyinka dambe ee gvSIG Foundation, waxaad u maleyneysaa inaad ka fekereyso Mexico, inkastoo fekerkeyga waa inaad aragto Guatemala sababtoo ah wax badan ayaa laga arki karaa.
Tusaale ahaan waxaan ka tagayaa qaar ka mid ah qalabka furan ee Brazil oo ay ku jiraan tirada dadka isticmaala ilaa taariikhda. Qaarkood waxay haystaan ​​magacooda rasmiga ah, kuwa kale waxay leeyihiin tarjumaad ku dhawaad ​​Isbaanish iyo isku day ah in ay u kala soocaan halka ay ugu habboon yihiin:
Maamulka Khayraadka Dabiiciga ah
GGAS (Xubnaha 517)
Trading System Management System Gaaska Dabiiciga The, ujeedadiisu tahay si buuxda wax looga qabto baahiyaha aasaasiga ah ee aagga ganacsiga ee shirkadda qaybinta gaaska dabiiciga ah oo kuu ogolaanaya maamulka diiwaanka, cabbirka, heshiisyada, biilasha, ururinta dakhliga, marka lagu daro bixinta macluumaadka isdhexgalka ee xisaabinta, maaliyadda, hawlgalka iyo maamulka.
Gsan (Xubnaha 3287)
Maareynta isku dhafan ee adeegyada nadaafadda. Gsan waxaa loo abuuray inuu kor u qaado heerarka waxqabadka iyo waxtarka hawlaha biyaha iyo bullaacadaha, waxaana lagu kabi karaa yaryar, dhexdhexaad iyo weyn.
I3GEO (Xubnaha 9747)
I3GEO waa software ah oo ku salaysan daabacaadda Internet xogta geospatial, gaar ahaan Mapserver. Ujeedada ugu weyn waa bixinta xogta da'ayeen iyo set oo ah qalabka navigation, guud ahaan falanqaynta, sarrifka iyo jiilka of maps on baahida ... iyadoo jidka ag fadhida, geesiga ah ee filimkan.
Kantaroolka Canshuuraha, Cadastre iyo Maareynta Degmada
Magaalada lacag la'aan ah (Xubnaha 7802)
City Free waa xalka kaliya ee maamulka maareynta kumbuyuutarka ee fuliya fikradaha ugu weyn ee la xiriira Nidaamka Caadiga ah ee Farsamo ee Multi-Purpose (CTM) iyo Shirkadda GIS. Ahaanshaha Barnaamijka Bilaashka ah ee la dejiyey iyadoo loo eegayo nidaam qaabaysan oo ku jira saddex lakab (MVC), si dhaqso ah loogu habayn karaa dalab kasta oo cusub.
Sago - Nidaam maareynta midaysan oo furan (Xubnaha 4369)
SAGU waa xal bilaash ah oo loogu talagalay in lagu caawiyo hay'adaha amaradooda. Hawlgalkeeda qaab-dhismeed, waxay bixisaa maamulayaasha qalab isku xira oo lagu hagaajiyo geeddi-socodka qaybaha kala duwan ee hay'adda.
e-Xusuusin (Xubnaha 5053)
E-Waraaquhu waa nidaam kombuyuutar ah oo loogu talagalay bixinta qaansheegta adeegyada elektarooniga ah, casriyaynta casriga canshuurta ISS / ISSQN.
e-ISS (Xubnaha 2403)
e-ISS waa nidaam kombiyuutar oo ujeedkiisu yahay casriyeynta Maareynta Canshuurta. E-ISS waxaa loo sameeyay si loo caawiyo canshuurta ISS ee magaalada, iyo sidoo kale in lala xiriiro canshuur bixiyaha iyo soo-saaraha adeegyada ISS.
CMS - Xakamaynta Brand (Xubnaha 1001)
Horumarinta Dawlada Hoose ee Bagéa, nidaamka waxaa laga abuuray dhibaatada haysashada kaydinta iyo dhibaatooyinka la xariirta ee ay keenaan diiwaannada jireed.
e-Magaalada (Xubnaha 8954)
E-City waxaa loogu talagalay in lagu kobciyo maamulka magaalooyinka reer Brazil ee hab isku dhafan. Tani waxay ka tarjumeysaa isdhexgalka u dhaxeeya shirkadaha degmada ee kombiyuutarka: Magaalo-madaxda, golaha degmada, maamulka degaanka, aasaasiga iyo kuwa kale.
Geplanes (Xubnaha 7460)
Geplanes waa barnaamijka maareynta istaraatiijiyada loogu talagalay shirkadaha dadweynaha ama kuwa gaarka loo leeyahay. Waxaa loo isticmaalaa diyaarinta qorshe istaraatiijiyadeed iyo fulinta falalka. Adigoo isticmaalaya Geplanes waxaad maamuli kartaa tallaabooyinka, ujeeddooyinka iyo cawaaqibta, calaamadaha iyo anomaliyooyinka. Iyadoo loo marayo warbixinnada, garaafyada iyo agaasimeyaasha guddida xakamaynta, isuduwayaasha, agaasimayaasha iyo madaxweynayaashu waxay leeyihiin aragtiyo muujinaya tilmaamaha iyo hay'addaba.
Tiknoolajiyada Macluumaadka Guud
Koruja (Xubnaha 7122)
Mashruucu wuxuu kacay kaddib markii baahi loo qabo shirkadaha dawlada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay si ay u maareeyaan, u maamulaan, u xakameeyaan oo u habeeyaan hantida IT-ga ee ka muuqata muuqaal gaar ah. Aragtideeda, fikradda ah in la abuuro nidaam loogu talagalay uruurinta otomaatiga ee qaabeynta khayraadka teknoolajiyada (server, rukumo, wareegyo, xarumo shaqo, iwm.).
Sisau-Sac-Contra (Xubnaha 5677)
Adeegyada macaamiisha adeegga, muraayadaha nidaamka maaraynta iyo xakamaynta kumbuyuutarka.
EMS (Xubnaha 7885)
Iyada oo loo marayo EMS waxaad ku maamuli kartaa safafka iyo adeegga wareejinta ee dhammaan noocyada shirkadaha ama ururada bixiya adeegyada macaamiisha dadka.
Jaguar (Xubnaha 2455)
Jaguar waa qaab Java EE bixisaa heer sare-ah naqshadaha software, isticmaali karo iyo extensible, oo ku salaysan is-dhexgalka ee daraasiin dhismeedka aasaasiga ah in dalban in natiijada ah MVC2 OO naqshadaha in xal la heer sare ah sidaynu, yar code Java iyo isticmaalka khayraadka sida IOC, DI iyo AOP si dabiici ah iyo si joogto ah.
CAU - Xarunta isticmaalka adeegga (Xubnaha 2013)
Waxaa la horumariyo by Embratur in ay hal dhibic kaliya ka mid ah hawlaha lagu taageerayo IT maamulka iyo user, sharciyayn lahaa geedi socodka hawl, bixinta hufnaan iyo oggolaadaan in dhammaan kuwa ku lugta leeyihiin waxgarasho saxda ah ee geedi socodka raacay by goobaha shaqada .
OASIS (Xubnaha 8524)
OASIS waxay u oggolaataa kormeerka ficilada IT-ga iyo shabakadaha kombiyuutarka, database-yada, casriyeynta, horumarinta nidaamka iyo goobaha, iyo kuwo kale.
MDArte (Xubnaha 2049)
MDArte waxaa loogu talagalay in la sameeyo qaab cusub oo loogu talagalay software dadweynaha, isticmaalka teknooloojiyada casriga ah, taas oo hoos u dhigta qiimaha adeegga tiknoolajiyadda macluumaadka, iyo ku tiirsanaanta xalka mawduucyada.
Headdress (Xubnaha 11.806)
Maaraynta deegaanka isku-dhafan ee dhexdhexaadka ah.
Tití (Xubnaha 2585)
Tití waxay maamushaa dhamaan xarumaha GNU / Linux. Halkaas waxaad ku sameyn kartaa qoraallo (qoraal ku qoran luqadda kombiyuuter) si loo saxo macluumaadka, shakhsi ahaanshaha iyo ururinta nidaam dhexdhexaad ah. Iyada oo jaamaha, waxa kale oo aad u qeexi karaan baaxadda buuxa ama qayb ka mid ah codsiga red.Su ayaa kor saarka Xarumaha Experience Serpro (dhismayaasha la xiriira Superintendency ee Information Technology, awooda farsamo si loo daboolo baahida loo qabo ICT iyo taageerida meelaha kaabayaasha)
PW3270 (Xubnaha 3716)
Bed3270 waa xajmiga hawada ee 3270, oo leh hawlo hormarineed iyo mid si fudud loo isticmaali karo (GTK diyaar), oo loo barbar dhigo qalabka ugu badan ee lagu isticmaalo suuqa.
GNUteca (Xubnaha 5585)
GNUteca waa nidaam udub dhexaad u ah dhammaan hababka maktabadda, iyadoon loo eegin tirada xajmiga ama tirada dadka isticmaala. Nidaamka waxaa loo abuuray sida waafaqsan shuruudaha la ansixiyey oo ay sameeyeen koox ka mid ah maktabada waxaana lagu hormariyey imtixaannada maktabada dhabta ah.
Provinha Brazil (Xubnaha 1763)
Provinha Brazil, oo ujeedkeedu yahay ujeedada Qorshaha Horumarinta Waxbarashada (PDE) ee MEC, qiimeynta ogaanshaha waxaa lagu dabaqayaa ardayda ku qoran Sanadka 2. Waxay ka caawisaa macallimiinta iyo maamulayaasha dugsiyada, maadaama ay u shaqeeyaan sidii qalab lagu ogaanayo heerka akhriska ee ardayda, u oggolaanaya saxitaanka iyo dib u barashada akhriska iyo qorista, hagaajinta tayada akhriska iyo qorista Kordhinta farbarashada hore ee caruurta.
SAELE (Xubnaha 1315)
SAELE waxaa soo saaray UFRS, si ay ugu adeegaan adeeggan muhiimka ah ee bulshada jaamacadda.
Bankiga Talent (Xubnaha 4675)
Baanka Talenta ayaa loo sameeyey si loo qoondeeyo awooda Golaha Wakiillada, wuxuuna aqoonsadaa awooda aadanaha ee hay'adda, si loo fududeeyo dib-u-eegista joogtada ah ee horumarinta farsamada, iyada oo loo marayo bixinta macluumaadka ay bixiyaan server-yada shaqsi
REDECA (Xubnaha 1182)
REDECA waa software loogu talagalay in lagu caawiyo sameynta shabakadaha bulshada si loo ilaaliyo carruurta iyo dhallinyarada. Waxay ku saleysan tahay faafinta iyo is dhaafsiga macluumaadka ee jawiga amniga macluumaadka, iyo xawaaraha isgaarsiinta ee u dhaxeeya jilayaasha shabakadda. Magaciisa wuxuu ka kooban yahay erayada RED iyo CEPA (Sharciga Ilmaha iyo Qaangaarka).
i-Educar (Xubnaha 14,336)
I-Waxbarashadu waa barnaamijka maamulka dugsiga. Dhexdeeda macluumaadka nidaamka iskuulada degaanka, taas oo yaraynaysa baahida loo qabo isticmaalka waraaqda, duubista dukumiintiyada, adeegga waqtiga ee muwaadiniinta iyo in la fududeeyo shaqada saraakiisha dawladda.
Amadeus (Xubnaha 6071)
Nidaamka Maareynta Waxbarashada ee Maqnaanshaha Waxbarasho ee isku dhafan
Kite (Xubnaha 5042)
GNU Kite / Linux waa qaybinta waxbarasho ee 2006 gaar ahaan loogu talagalay carruurta, dhallinyarada iyo dugsiyada xannaanada, xanaanada caruurta iyo dugsiyada aasaasiga ah. Hadafkeedu waa in sheybaarka kombiyuutarka laga dhigo jawi nabadgelyo leh, xiiso iyo waxbarasho, ciyaaraha iyo barnaamijyo badan oo maskax ahaan u adeegsanaya iyada oo aan laga badinin farxadda waxbarasho.
Peacock (Xubnaha 635)
Waa qaybin ku saleysan Debian GNU / Linux si loogu isticmaalo telecentres ee Brazil.
e - Proinfo (Xubnaha 7804)
Habka waxbarashada fog.
Waxbarashada Linux (Xubnaha 5612)
Waxbarashada Linux waa xal software oo wax ka tarta gaaritaanka ujeedooyinka ProInfo in la dhiiri geliyo dadka isticmaala dhamaadka ku saabsan isticmaalka iyo helitaanka sidii iyo sidoo kale madax ka ah shaybaarka ee la xiriirta dayactirka iyo warsiinta ah.
Waxbarashada (Xubnaha 4185)
Waxbarashadu waa hab waxbarasho oo loo qorsheeyey ujeedada kor u qaadida isdhexgalka barbaarinta ee kombiyuutarada iyo waxbarashada oo bilaash ah. Ujeedada mashruucani waa dhismaha qalabka macalimiinta iyo ardayda dugsiga hoose si looga caawiyo isdhexgalka teknoolajiyada fasallada.
Maareynta Xafiisyada Dadweynaha
Curupira (Xubnaha 7574)
Waxay u oggolaanaysaa maamulka maareynta daabacaadda iyada oo loo marayo maaraynta caqli-gal ah ee kharashka badan, daabacaadda, sahayda, ogolaanshaha iyo isticmaalka wax-ku-oolka ah ee shabakadaha shirkadaha.
Qaado (Xubnaha 6174)
Nidaamka software-ka iyo qalabka ee Oktiva oo loogu talagalay maaraynta adeegyada dadweynaha.
Nidaamka Maareynta Sheegashada (Xubnaha 14.824)
DGS waxaa lagu horumariyey falsafadda barnaamijka bilaashka ah si loo daboolo baahiyaha IT-ga, isbedelka dalabka mashruucyada gudaha ee ay gacanta ku hayaan xafiiska mashruuca, si kor loogu qaado tayada adeega dadweynaha. Si kastaba ha noqotee, iyada oo ay sabab u tahay dabacsanaanta, qalabka waxaa loo isticmaali karaa aag kasta, hay'ad dawladeed ama shirkad raba inay si wax ku ool ah u xakamayso baahidooda.
IP PBX SNEP (Xubnaha 3215)
Software software qaabeynta adeegga PBX PBX.
Taageero (Xubnaha 3221)
Apoena waa barnaamij bilaash ah oo ka soo baxay baahida loo qabo in lagu fududeeyo dimoqraadiyadda macluumaadka talobixinta Bangiga ee Brazil. Qalabka wuxuu soo saaraa gooynta cadaadiska. Waxay u shaqeysaa sidii wakaalad warbaahin ah oo ururinaysa oo ka baaraandegta macluumaadka laga helo ilaha macluumaadka 300.
FPS (Xubnaha 5265)
Badalinta kantaroolka gawaarida degmada ee dhamaan hay'adaha dawlada, jawi gaar ah.
ERP5 BR (Xubnaha 8733)
ERP5 BR waa xal u Integrated Management Systems (ERP) oo bixiya hufnaan, dabacsanaan iyo horumar ee dadka isticmaala ay. Isticmaalka lagu daydo ganacsiga (habyaalada) maanta jira, ERP5 daboola meelaha xisaabaadka, xiriirka macaamiisha, ganacsiga, maamulka bakhaar, gaadiidka, qaan, maamulka khayraadka aadanaha, design sheyga, wax soo saarka, maamulka mashaariicda, iyo kuwo kale oo badan.
Nidaamka Ombudsman (Xubnaha 986)
Nidaamkan, horumariyo madal webka hubisaa adkeysiga iyo Bulshda dhaqaale iyo mid farsamo si Ombudsman, jidaynayey saarista ee warbixinada maamul bixinta tirakoobka ee xogta la xoojiyey oo ayna u oggolaadaan in ay isticmaalaan Wakiilada oo leh qaabab kala duwan. Iyada oo nidaamka of Ombudsman ka, hay'adda ka dhigi kara ogaanshaha iyo falanqeynta dhacdooyinka heshay iyo waxay siiyaan macluumaad muwaadiniinta ee geedi socodka this.
InVesalius (Xubnaha 5905)
InVesalius waa barnaamij loogu talagalay caafimaadka dadweynaha oo ujeedadeedu tahay in lagu caawiyo ogaanshaha iyo qorsheynta qalliinka. From images laba dhinac-cabbir (2D) helay CT ama MRI, barnaamijka u ogolaanaya oo abuuraya tusaalayaashii dalwaddii in sadex dhinac (3D) qaab-dhismeedka jidh dhiganta bukaanka hoos daryeelka.
GP-Web (Xubnaha 6980)
Maareynta mashruuca iyo hababka maareynta
Cacic (Xubnaha 34.798)
Dowladda Public First Software Federaalka oo sabab u ah ururka Consortium for Cooperation dhexeeya SLTI ah - Department of Logistics Technology Information oo ka mid ah Wasaaradda Qorshaynta, Miisaaniyad iyo Maareynta - Xaaq iyo DATAPREV - Business Information Technology iyo Social Security, horumariyo by DATAPREV Xafiiska Gobolka ee Ruuxa Quduuska ah.
Qaybinta daawada khaaska ah - DIM (Xubnaha 769)
Nidaamka DIM wuxuu ka dhashay baahida loo qabo qalab si loo maareeyo qaybinta dawooyinka ee degmooyinka leh in ka badan hal milyan oo deggan iyo celcelis ahaan wax ka badan 20.000 maalintiiba. Xakamaynta hawlgalka ee nooc kasta oo ka mid ah iyo saxsanaanta daawooyinka ay heli karaan bukaanka iyo aqoonsiga gaarka ah ee bukaanku, sidaas darteedna damaanad qaadaya raadkooda.
SPED - Nidaamka Electronic System (Xubnaha 15.049)
Nidaamka Diiwaangalinta Dukumiintiga Elektrograamka (SPED) waa nidaam WEB oo ka soo baxay baahida loo qabo in la isku daro xakamaynta, iyada oo la baddalayo dukumintiyada gudaha iyo dibadda ee ururada militariga ee ciidanka. Laga soo bilaabo lagama maarmaanka u ah nidaamka waxaa soo saaray Ciidanka si uu u xakameeyo dukumiintiyada qormooyinka
Multimedia iyo Web
Minuano (Xubnaha 4460)
Minuano - Streaming Audio iyo Video software gebi lacag caddaan ah oo lacag la'aan ah waa nidaam qabsaday, processing, baakadaha iyo qaybinta signal digital for aabooyinka ama Internet inay baahin nool ama ka soo dejisan.
LightBase - Xaqiijinta xogta GED-da ama meshaalka. (Xubnaha 5209)
Xalka LightBase waa xog-ururin qoraal ah iyo bay'ada horumarinta miyuusikada waxay isku daraysaa server-ka codsiyada degdegga ah iyo qoraalka saddex-cabbir ah, kaas oo u oggolaanaya in si deg-deg ah loo helo macluumaad kasta oo ku jira database-ka.
Xemelê (Xubnaha 5465)
Kooxdani waxay doonaysaa in ay wadaagto xalalka lagu hormarinayo geeddi-socodka wada-xaajoodka iyo wada-shaqeynta iyadoo la adeegsanayo internet-ka. Waxaan ka hadleynaa qalabka lagu maamulayo website-yada, blogyada, joornaalada, wikisyada, iyo weliba jawiga isdhexgalka adeegyada adeegga emailka, jadwalka, shaqo-socodka, iwm.
OpenACS (Xubnaha 2207)
Community Open Architecture (OpenACS) waa nidaam horumarineed oo abuuraya codsiyada Webka ee taageera bulshooyinka beelaha ah.
ASES (Xubnaha 2777)
ASES waa qalab lagu qiimeeyo, lagu simo loona saxo helitaanka boggaga, goobaha iyo portals, iyo qiimaha weyn ee horumarinta iyo daabacayaasha.
WebIntegrator (Xubnaha 7680)
Webintegrator waa jawi aad u firfircoon oo loogu talagalay horumarinta codsiyada webka ee Java, taas oo abuuraysa sahlan isticmaalka iyo dardar-galinta barashada farsamoyaqaanada.
EdiTom (Xubnaha 4560)
Si aad ugu oggolaato bilowga ah in ay leeyihiin qalab loogu talagalay abuurista dhawaaqa, waxay u matalaan qaab sawireed, qoraan muusikada iyo saamaynta dhawaaqa, software ayaa loo baahan yahay si loo qanciyo xarumahan.
KyaPanel (Xubnaha 2984)
KyaPanel waa nidaam maareyn e-maareynta email ah oo leh Postfix, LDAP iyo Courier.
Ginga (Xubnaha 12,591)
Ginga waa lakabka software dhexe (dhexdhexaad) kaas oo u oggolaanaya horumarinta codsiyada isdhexgalka ee telefishinka dhijitaalka ah, oo si madax bannaan u ah kuwa iibiya qalabka casriga ah ee kumbiyuutarrada xuduudaha (sanduuqyada sare).
kiliyaha (Xubnaha 1396)
Kortex waa qaab u ah horumarinta codsiyada mashiinka iskutallaabta ee C ++.
SIGATI (Xubnaha 3547)
SIGATI waa aalad garaafyada in adkeynaysa in interface a maamulka hal adeeg buugga loo qaybiyey oo ku salaysan OpenLDAP, kaas oo u ogolaanaya maareynta walxaha, maqaal qoruhu, replicas, jaantus iyo liiska helitaanka ah.
FormDin (Xubnaha 2500)
FormDin waa qaab nidaamsan oo lagu horumarinayo codsiyada websaydhka.
Demoiselle (Xubnaha 1229)
Demoiselle Framework waa API Java ah oo loogu talagalay horumarinta codsiyada Mukharjee, abuuray by Data Service Federaalka Processing (Serpro) ee 2008 oo sii daayay sida software lacag la'aan ah April 2009.
Post Previous«Previous Muuqaalka sawirka iyo qaybta la jaray AutoCAD 2013
Post Next Buug-yaraha Sawir-la'aanta La AqriyoNext »